RW Rooble & wafdigiisa oo lagu soo dhoweeyey Magaalada Abu Dhabi (Sawirro)
Ra’iisul Wasaaraha XFS Mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa gaaray magaalada Abu Dhabi ee caasimadda Isutagga Imaaraadka Carabta, halkaas oo uu uga qeyb galayo tacsida madaxweynihii geeriyooday ee dalka Imaaraaadka Carabta Sheikh Khalifa Bin Zayid. Sidoo kale waxa uu Ra’iisul...
Wararkii ugu dambeeyey dabkii qabsaday Suuq ku yaalla isgoyska Banaadir (Sawirro)
Waxaa isa soo taraya khasaare baaxad leh oo ka dhashay dab xoog leh oo caawa fiidnimadii qabsaday goobo ganacsi oo ku yaalla wadada isku xirta isgoyska Banaadir iyo isbitaalka Digfeer ee magaalada Muqdisho. Inkastoo ay jiraan qeybo ka mid ah dabkaas oo la demiyey haddana waxaa...
Sheekh Aadan Madoobe oo laga codsaday qeyb kamid ah Lacagihii Musharaxiinta laga qaaday (Sawirro)
Guddoomiyaha Golaha Shacabka BJFS mudane Sheekh Aadan Maxamed Nuur (Madoobe) ayaa maanta kulan muhiim ah la qaatay Guddiga Gurmadka Abaaraha kuwaas oo Guddomiyaha kala hadlay sidii wax looga qaban lahaa abaarahan soo noq-noqday. Guddiga abaaraha ayaa Guddoomiyaha golaha...
Gollaha Wasiirrada Soomaaliya oo maanta ansixiyay xeerar kala duwan (Sawirro)
Shirka Golaha Wasiirrada Xukuumadda Federaalka Soomaaliya oo uu maanta guddoomiyay Ra’iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa lagu ansixiyay xeerar kala duwan ee soo diyaariyeen wasaaradaha qaar. Dood iyo falanqeyn dheer kadib ayaa gollaha wasiirrada waxa ay ansixiyeen...
Taliyihii Ciidamada Nabad Sugida ee garoonka Aadan Cadde oo xilka laga qaaday
Warar soo baxaya ayaa sheegaya in xil ka qaadis lagu sameeyay taliyihii ciidanka Nabad Sugida iyo Sirdoonka Qaranka ee garoonka diyaaradaha Aadan Cadde Khadar Maxamuud oo loo yaqaan Sanka . Taliyahan oo ahaa nin awwood badan saameyn badana ku dhax lahaa ciidamada Nabad Sugida...
Axmed Madoobe oo Muddo kadib maanta ku dhax lugeeyay xarunta Madaxtooyada (Sawirro)
Ra’iisul Wasaaraha XFS Mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa xafiiskiisa ku qaabilay madaxweynaha dowlad-goboleedka Jubaland Mudane Axmed Maxamed Islaam oo ay ka wada hadleen gebagebada howshii doorashada dalka ee guushah ku soo dhammaaday. Madaxweyne Axmed Madoobe ayaa Ra’iisul...
Madaxweyne Xasan Sheekh oo la kulmay Safiirada dalalka Qatar iyo Sacuudiga (Sawirro)
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa wali ku mashquulsan qaabilida iyo la kulanka safiirada wadamada caalamka qaarkood u fadhiya Soomaaliya iyo madax kala duwan. Xasan Sheekh ayaa saakay la kulmay safiirka dowladda Qatar u fadhiya...
Madaxweyne Xasan Sheekh oo Casuumay Saaxiibadiisii guusha u horseeday (Sawirro)
Madaxweynaha cusub ee dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa caawa casuummad u sameeyay qaar kamid ah saaxiibadiisii ay kawada tirsanaayeen Gollaha Midowga musharaxiinta Mucaaradka. Xasan Sheekh oo 15-kii bishan loo doortay Madaxweynaha Soomaaliya ayaa uga...
Madaxweyne Erdogan oo si cad u diiday in Labo dal oo Yurub kuyaala ku biiraan NATO
Dowladaha Sweden iyo Finland ayaa doonaya in ay xubin ka noqdaan Gaashaanbuurta NATO, hasa haatee doonista waddamadaasi waxaa si cad u diiday uguna deeriyay Madaxweynaha Turkiga Rajeb Dayib Erdogan. Waxa uu sheegay Madaxweyne Erdogan in aysan marnaba raali ka aheyn ayna ogolaan...
Beesha caalamka oo War ka soo saartay dorashada Madaxweyne Xassan Shiikh (Akhriso)
WAR SAXAAFADEED Saaxiibada Beesha caalamka* ee Soomaaliya waxay Xasan Sheekh Maxamuud ugu hambalyeeyeen doorashada loo doortay Madaxweynaha Dowladda Federaalka Soomaaliya. Waxaan Madaxweynaha xilka ka sii degaya Maxamed Cabdullaahi ‘Farmaajo’ uga mahadcelineynaa sida uu u fuliyay...
Midowga Afrika oo taageero u muujiyey Xassan Shiikh, labo arrina ku amaanay Farmaajo
Gudoomiyaha Guddiga Midowga Afrika, Moussa Faki Mahamat, ayaa u hambalyeeyay Xasan Sheekh Maxamuud oo loo doortay madaxweynaha cusub ee Somalia. Guddoomiyuhu ayaa ku amaanay madaxweynaha xilka ka dagaya Maxamed C/llaahi Farmaajo shaqadi wanaagsaneyd ee uu qabtay mudadii uu...
Muxuu Xassan Shiikh kala hadlay taliyeyaasha ciidamada Booliska iyo XDS? (Sawirro)
Madaxweynaha la doortay ee Somalia Xassan Shiikh Max’uud ayaa kulan la qaatay taliyeyaasha ciidamada Booliska iyo Xoogga dalka Soomaaliyeed Jen. Xassan Maxamed Xijaar iyo Jen. Odowaa Yuusuf Raage. Kulankan ayaa noqonaya kii ugu horeeyey ee Madaxweynaha la doortay ee Somalia uu la...
Bandow lagu soo rogay magaalada Muqdisho iyo Shacabka oo farriin loo diray
Magaalada Muqdisho oo beri lagu wado in ay ka dhacdo doorashada Madaxweynaha Soomaaliya ayaa goordhaw lagu soo rogay bandow bilaabanaya caawa sidoo kalana soconaya ilaa maalinta Isniinta. Ciidamo badan oo kuwa ammaanka ah ayaa lasoo dhigay waddooyin badan oo kuyaala magaalada...
Shir Xasaasi ah oo looga hadlayay Amniga doorashaada oo goordhaw ka dhacay Muqdisho (Sawirro)
Guddoomiyaha Golaha Shacabka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Sheekh Aadan Maxamed Nuur (Madoobe) iyo Guddoomiyaha Aqalka Sare mudane Cabdi Xaashi Cabdullahi ayaa waxay maanta kulan ku saabsan amniga doorashada la yeesheen gudigga qabanqaabada doorashada madaxweynaha...
Guddiga isku dhafka ah ee qaban qaabada doorashada Madaxweynaha Soomaaliya ayaa soo bandhigay goobta ay ka dhaceyso doorashada oo ah teendhada Afisiyooni ee ku dhaxtaala garoonka Aadan Cadde. Doorashada Madaxweynaha Soomaaliya ayaa lagu wadaa in teendhada Afisiyooni ka dhacdo...
Sida ay goordhow shaacisay wakaaladda wararka rasmiga ah ee WAM Madaxweynihii dalka Isu-tagga Imaaraadka Carabta Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan ayaa geeriyooday. Sheekh Khalifa, oo ahaa 73 jir ayaa muddo sanado ah la xarbinayey xanuuno kala duwan oo soo wajahay Sheikh Khalifa...
Madaxweynaha Somaliland, Mudane Muuse Biixi Cabdi, ayaa maanta qaabilay wefdi ka socda xafiiska Madaxweynaha dalka Senegal ee Galbeedka qaaradda Afrika, Mudane Macky Sall oo ah guddoomiyaha Midowga Afrika (AU), kuwaasoo ay xubno ka yihiin Mohamamel habib Niang iyo Elhadji...
Ra’iisul Wasaaraha XFS Mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa xafiiskiisa iyo xarunta Xukuumadda ku qaabilay halgamaa Cabdikariin Shiikh Muuse Qalbi dhagax oo sanadkii 2017-kii si sharciga baar marsan loogu gacan galiyay Dowladda Ethiopia. Ra’iisul Wasaaraha ayaa Qalbi dhagax ka...
Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta ku soo dhaweeyey Somaliland Jeneral Stephen Townsend, Taliyaha Taliska Ciidammada Maraykanka ee Afrika (AFRICOM), si wada-tashi looga sameeyo horumarinta danaha labada dhinac ee ammaanka Bariga Afrika. Jeneral Townsend, oo ah sarkaalkii...
Taliyaha Ciidanka Booliska Soomaaliyeed S/Gaas Cabdi Xasan Maxamed Xijaar oo safar shaqo ku jooga dalka Jabuuti, ayaa maanta halkaas tababar ugu soo xiray cutubyo ka tirsan Ciidanka Daraawiishta Booliska Soomaaliyeed. Ciidankan oo noqonaya dufcaddii 16-aad oo tababar heerkeedu...